Kilaashiin 40 seensa Finfinnee irratti too'annaa jala oole - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Kilaashiin 40 seensa Finfinnee irratti too’annaa jala oole
Kallattii Sulultaan gara Finfinneetti seenaa kan ture Kilaashiin 40 too’annaa jala oole. Kanaan alattis shugguxuii 50tu qabame. Poolisiin Oromiyaa hujii boonsaaf galata qabu.
Dhiiroo jarreen waraana magaalaa keessaatiif (urban warfare) uf qopheessaaru fakkaata.
Yeroo hunda qabamuun isaa kan argisiisu yoo jiraate waan lama.
-Tokkoffaa, meeshaan baay’inaan seenaa jiraachuu isaa fi too’annaan dadhabaa ta’uu isaati.
-Lammaffaa, too’annaan cimaa ta’uu isaati.
Kan natti fakkaatu too’annaan laafaa ta’uu isaati. Osoo too’annaan cimaa ta’ee warri seensisuu fi konkolaachistoonni kun hundi osoo oduun meeshaan too’atamee guyyaa guyyatti dhagayamu meeshaa waraana hin fe’an ture. Carraan qabamuu xiqqaa ta’uu isaati kan isaan onnachiise.
Dubbiin hamtuudha. Keellaa irratti too’annaa cimsuun qofti gayaa hin fakkaatu. Meeshaan tooftaa addaddaan (harree, nama, kkf) seenuu mala. Gama biraatiin, keellaawwan hafan osoo maal godhan kan meeshaa yeroo hunda seensa Finfinnee irratti qofa kan qabamuuf? Kunis waan lama akeeka.
Tokkofaa, keellaaeean isaan hafan huji isaanii sirrtti hojjataa kan hin jirre ta’uu fi
Lammaffaa, maddi meeshaa waraanaa magaalota Finfinnetti kaluu ta’an (Oromiyaa fi naannoo Amaaraa) ta’uu isaati.
Burqaan meeshaa gara Finfinneetti seenaaruu naannoo Oromiyaa taanaan Poolisiin Oromiyaa fi Qeerroon hujii gayaa hojjataa akka hin jirre argisiisa. Naannoo biraa irraa yoo kan dhufaa jiru ta’e meeshaan waraanaa qabamuun kan male seensa Finfinnee irratti osoo hin taane seena Oromiyaa irratti. Qaawwala jiran cufuu haga meeshaan waraanaa akka galaanaatti biyya fudhatu eeguun nurra hin jiraatu.
Meeshaa waraanaan walqabatee oduun guyyaa guyyatti dhagayamu kan addeessu magaalaan Finfinnee meeshaa waraanaan guutamuu isiiti. Tarkaanfiin cimaan, manniin shakkamtootaa sakatta’amuu dabalatee, fudhatamuu qaba. Kanaan achitti dhimmichi sadarkaa poolisiin too’achuu hin dandeenne irra wanti hin genneef hin jiru.
Previous articleDiraamaa biraa: Shirri G7 hin milkaayu
Next articleTPLF jijjiiramaaf qophiidhaa miti jetti